မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ pump, ပလပ်စတစ်ရေကူးကန် Heat Pump, တရုတ်နိုင်ငံရှိ OSB Heat Pump ထုတ်လုပ်သူ
အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင်
ရေကူးကန်အပူ Pump ရေကူး
multi ရာထူးအမည်အပူ Pump
ရေ Chiller အပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း
Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Other Markets , West Europe ထုတ်ကုန်:91% - 100% Cert:ISO9001, CB, CCC, CE, EMC, SSA ဖေါ်ပြချက်:မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ pump,ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump,OSB အပူ pump,Wifi Remote Control အပူပေးစက်,,
ရေကူးကန်အပူ Pump ရေကူး 
Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက် 
ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း
Split ကိုလေတပ်ရင်းမြစ်အပူ Pump
EVI အပူ Pump 
EVI အနိမျ့ Ambient အပူ Pump
Evi 85 ° C မှအပူ Pump
အင်ဗာတာအပူ Pump 
Monobloc Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump
DC ကအင်ဗာ Split ကိုအပူ Pump
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေကူးကန်အပူ Pump ရေကူး > ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump
ရေကူးကန်အပူ Pump ရေကူး
Air ကိုရင်းမြစ်အပူ Pump ရေအပူပေးစက်
EVI အပူ Pump
ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ pump, ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, OSB အပူ pump R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း R410a မြေအောက်ရေကူးကန်အပူ pump
ရေကူးကန် Air Source Heat Pump အမေရိကန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
ရေကူးကန်အတွက်မီးခိုးရောင် Air Heat Pump ရေအပူပေးစက်
ပလတ်စတစ် Rusting အခမဲ့ SPA ရေကန်အပူ pump
မီးဖိုအပူ pumps အပူပေးစက် pumps
ပလပ်စတစ်သေတ္တာ SPA အပူပေးစက် Cooler Heat Pump
မြင့်မားသောရဲရေကူးရေကန် Pump အပူပေးစက်
လေကြောင်းအရင်းအမြစ်ရေကူးကန်၊ ရေပူစမ်း၊ ရေပူရေစုပ်စက် (အပူပေးစက်)
50hz Hot Sale ပလပ်စတစ်သေတ္တာ Jacuzzi အပူပန့်
ဟိုတယ် Pool Heat Pump SPA အပူပေးစက်
ပလပ်စတစ် Spa ရေကူးကန်အပူ pump pump
တစ် ဦး chaleur sur l'air ရေကူးကန်အပူပေး pompe
ABS ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်ဖြင့်တိုက်စားထားသော Spa ရေအပူပေးစက်
မြေအောက်ရေကူးကန် Hot Sale အတွက်အပူ pump
အမှတ်တံဆိပ်: ဖောက်သည် OEM အမှတ်တံဆိပ်
Supply နိုင်ခြင်း: 1000 per week
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ OSB အပူစုပ်စက်ပလတ်စတစ်အမှုန့်သည်တိုက်စားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ရွေးချယ်ရန်အရောင်များစွာ။ ၂။ အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုနှင့်အတူအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးရေကူးကန် Heat Pump သန့်ရှင်းသောတိုက်တေနီယမ်အပူလဲလှယ်။ 3. ပစ်မှတ်အပူချိန် 8 ဒီဂရီမှ 40 ဒီဂရီချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, နှစ် ဦး စလုံး...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်၊ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရေကူးကန်အပူစုပ်စက် ကမ်းရိုးတန်းforရိယာပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ၂။ မြေပြင်ရေကူးကန်အထက်အပူစုပ်စက်သည်အထူးသင့်တော်သော PVC titanium heat exchanger ကိုအသုံးပြုသည် တောက်ပသောပတ်ဝန်းကျင်။ ၃။ အနိမ့်ဆုံးရေအပူချိန်က ၈ ဒီဂရီ၊...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက်ပလတ်စတစ်အခွံ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးရေကူးကန်အပူ pump ကပိုသည် သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ shell ကိုထက်သင့်လျော်သော။ ၂။ ရေကူးကန်အပူစုပ်စက် သည်မြင့်မားသောချေးခြင်းအားတိုက်တေနီယမ်ပြွန်အပူဖလှယ် စက် ကိုအသုံးပြုသည်။ ၃။ အနည်းဆုံး ၈ ဒီဂရီမှ ၄၀ ဒီဂရီမှ...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ OSB အပူစုပ်စက်တွင်ပလတ်စတစ်အခွံကိုအသုံးပြုသည် ဥရောပနိုင်ငံများ။ OEM ဒီဇိုင်း optional ကို။ 2. ပိုကောင်းသည့်အပူလွှဲပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ PVC shell ကိုနှင့်ပြွန်အပူရေလဲလှယ်။ ၃။ လေနှင့်ရေအပူစုပ်စက်တွင်အပူနှင့်အအေးပေးသည့်အရာ၊ Mini 8 ဒီဂရီ နှင့်အမြင့်ဆုံး 40 ဒီဂရီ။ 4....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ OSB အပူစုပ်စက်သည်ပင်လယ်ရေချေးတိုက်တေနီယမ်အပူဖလှယ်သူဖြစ်ပြီးသက်တမ်းပိုရှည်စေသည် ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်၏။ ၂။ အပူစုပ်စက်၏အပူနှင့်အအေးသည်အနိမ့်ဆုံးပစ်မှတ်အပူချိန်ကို ၈ အထိနိမ့်နိုင်သည် ဒီဂရီနှင့် အမြင့်ဆုံးပစ်မှတ်အပူချိန် 40 ဒီဂရီအထိမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ ၃။ အပူချိန် ၁ ဒသမ ၅...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ အဖြူ၊ အနက်ရောင် / မီးခိုးရောင် နှင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက်အခြားအရောင်များ။ ၂။ OSB အပူစုပ်စက်သည်ပင်လယ်ရေချေးတိုက်တေနီယမ်အပူဖလှယ်သူဖြစ်ပြီးသက်တမ်းပိုရှည်စေသည် ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်၏။ ၃။...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ အဖြူ၊ အနက် / မီးခိုးရောင်နှင့်အခြားအရောင်များပလတ်စတစ်အခွံအရောင်သည်ရွေးချယ်ခြင်း၊ 2. ကို C အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ Pump ပေါ်တွင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ (၃) OSB အပူစုပ်စက်သည်ပလပ်စတစ်အခွံကိုအသုံးပြုသည် ဥရောပနိုင်ငံများ။ OEM ဒီဇိုင်း optional ကို။ 4....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည် စာရွက်သတ္တု နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်အခွံကိုအသုံးပြုသည် shell, ကကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ၂။ မြင့်မားသောတိုက်စားခြင်းရေကူးကန်အပူစုပ်စက် PVC shell titanium coil exchanger ။ ၃။ ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည်အပူ ၄၀ ဒီဂရီအထိအပူပေးနိုင်ပြီး ၈...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ Wifi ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည် ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် ipad ။ ဥရောပနိုင်ငံများတွင် 2. ပလတ်စတစ်ခွံရေကူးကန်အပူစုပ်စက်အကြိုက်ဆုံး, အမျိုးမျိုးသောဖက်ရှင် အရောင်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၃။ ရေအပူစုပ်စက်သည်အပူချိန် ၁ မှ ၅...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ၁။ လေအပူစုပ်စက်၊ အပူချိန် ၁ မှ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကွာခြားမှု။ 2. လွယ်ကူသောကွန်တိန်နာတင်ဘို့ Pallet ထုပ်ပိုး။ ၃။ CE အသိအမှတ်ပြုအပူပန့်များသည်အပူစွမ်းရည်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရွေးချယ်ကြသည်။ ၄။ ရေဘေးဒုက္ခသည်များကာကွယ်သည့်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည်ကမ်းရိုးတန်းဒေသအတွက်သင့်တော်သည်။...
ထုပ်ပိုး: ပုံး / အထပ်သားအထုပ်
Supply နိုင်ခြင်း: 3000 SETS/ MONTH
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. OSB အပူစုပ်စက် wifi အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှု optional ကို။ 2. ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်၏တိုက်တေနီယမ် Coil အခွံအပူ Exchanger အတွက် ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိပါတယ်။ ၃။ အပူပေးရုံသာမကအအေးပေးရုံသာမကရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည် သင်နှင့်တွေ့ဆုံ နိုင်သည် ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ။ 4....
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်အတွက်သံချေးမခံခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက် s ကိုကမ်းရိုးတန်းဧရိယာများအတွက် uitable ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အသေးစားရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည် PVC shell တွင် titanium heat exchanger ကိုအသုံးပြုသည်။ ချေးခြင်း၊ ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်ကိုသက်တမ်းရှည်စေပါသည်။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. စိတ်ကြိုက်ကွဲပြားခြားနားသောပလပ်စတစ်အဖုံး၏ရွေးချယ်နိုင်၊ သံချေးနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသအတွက် ပို၍ သင့်တော်သည်။ ၂။ ရေကူးကန်အပူရေစုပ်စက်သည်အထူးသဖြင့်တောက်ပသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် PVC titanium heat exchanger ကိုအသုံးပြုသည်။ 3. အနိမ့်ဆုံးရေအပူချိန် 8 ဒီဂရီဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးရေအပူချိန် 40 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. လွယ်ကူသောကွန်တိန်နာတင်ဘို့ Pallet ထုပ်ပိုး။ ၂။ ရေအပူနှင့်အအေးနှစ်မျိုးလုံး။ ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက် spa / ရေကန်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ ၃။ စွမ်းအင်ထိရောက်သောချေးနှိမ်နင်းခြင်းရေကူးကန်အပူရေစုပ် PVC shell ကိုအတွက်တိုက်တေနီယမ်အပူလဲလှယ်။ ၄။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ရေအပူစုပ်စက်သည်အပူချိန် ၁ မှ ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကွာခြားနိုင်သည်။ ၂။ PVC shell တွင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော titanium heat exchanger လျှပ်စစ်ရေကူးကန်အပူပေးစက် ။ (၃) Perfect Multifunctional OSB Heat Pump သည်အေးပြီးအပူပေးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 4. Wifi...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : 1. ရေကူးရေကန်အပူစုပ်စက်စာရွက်သတ္တုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်အခွံကိုအသုံးပြုသည် shell, ကကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ၂။ မြင့်မားသောတိုက်စားခြင်းရေကူးကန်အပူစုပ်စက် PVC shell titanium coil exchanger ။ ၃။ ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူစုပ်စက်သည်အပူ ၄၀ ဒီဂရီအထိအပူပေးနိုင်ပြီး ၈...
တရုတ်နိုင်ငံ ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ pump,ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump,OSB အပူ pump,Wifi Remote Control အပူပေးစက်,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ pump,ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump,OSB အပူ pump,Wifi Remote Control အပူပေးစက်,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
50 000 BTU ရေကန်အပူ Pump Chiller
Water Ground အရင်းအမြစ် Scroll Type Heat Pump
ရေပူအတွက် Multi Function Heat Pump
Inflter Heating သည်အင်ဗာတာအပူ pump
စက်မှုလက်မှုအမြင့် Temp Air ကိုရန်ရေအပူ Pump
380V စက်မှုရေအပူပေးလေကြောင်းအရင်းအမြစ်အပူ pump
80kw DC အင်ဗာတာအပူ Pump အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး Chiller
2019 ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Hvac အပူ Pump Chiller
17kw Freestanding တပ်ဆင်ခြင်းမြင့်မားသောအပူချိန်အပူစုပ်စက်
Circulation Pump နှင့်အတူလေအရင်းအမြစ်အပူ pump
Power Input ဖြင့် OSB Inground Pool Heat Pump
မြင့်မားသော COP အပူ Pump လေအရင်းအမြစ်ပြည်တွင်း
Hybrid အားလုံးတစ်ခုမှာအပူ Pump
High COP High Temp Pump ပူရောင်းခြင်း
50kw အပူစွမ်းရည်နှင့်အတူအင်ဗာတာအပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး Chiller
မြေပြင်ရင်းမြစ်အပူ Pump 12kw
OSB အပူ pump
Wifi Remote Control အပူပေးစက်
မြေပြင်ရေကူးကန်အပူ pump ပလပ်စတစ်ရေကူးကန်အပူ pump OSB အပူ pump Wifi Remote Control အပူပေးစက် မြေပြင်ရေကန်အပူ pump
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. All rights reserved ။